McKnight Names Writer Marcie Rendon 2020 Distinguished Artist - McKnight Foundation
Deynta Sawirka: Jaida Grey Eagle
McKnight magacyada Qoraa Marcie Rendon 2020 Farshaxan caan ah
Ururka 'McKnight Foundation' wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo xulashada Marcie Rendon Abaalmarinteeda Farshaxanka 2020 ee Sharafta leh — abaalmarin $50,000 loo sameeyay in lagu sharfo farshaxanka Minnesota oo door weyn ka qaatay nolosha dhaqanka ee gobolka. Rendon, waa xubin ka diiwaangashan White Earth Nation, waa qoraa gabayadiisa, riwaayadaha, buugaagta carruurta, iyo sheekooyinku ay sahamiyaan adkeysiga iyo bilicsanaanta dadka asaliga ah.
“Marcie waxay cod adag oo lama huraan u keentaa noocyo badan,” ayay tidhi Pamela Wheelock, madaxweynaha ku-meel-gaarka ah ee McKnight. Waxay abuurtay shaqo aad u weyn, oo ay ka mid yihiin gabayo, riwaayado, heeso, iyo gabayo abaalmarinno dambiilayaal ah, iyadoo dhammaantood kor u qaadaysa codadka kale ee Umadaha ku nool. Balanqaadkeeda samaynta farshaxanimada bulshada dhexdeeda waxa farshaxan caan ah uu uga dhigan yahay Minnesota iyo McKnight. ”
Rendon waa haweeneydii u dhalatay Mareykanka Mareykanka ee ugu horreeysay ee heshay Abaalmarinta Farshaxanka Quruxda badan, oo markii ugu horreysay la siiyay 1996.
Qoraa sheeko-yaqaan ah iyo qoraa caan ah, Rendon waa qoraa ku guuleysta abaalmarinta Taxane qarsoodi ah oo Madoow ah, oo laga dejiyay Red River Valley ee Minnesota. Buuggii ugu horreeyay ee taxanaha, Dil wabiga cas, wuxuu kasbaday Abaalmarinta 'Pinckley Prize' ee loogu magacdaray "Nockley Prize", iyo kii labaad, Gabar La Waayey, waxaa loo magacaabay Qorayaasha Waxyaabaha Qoraaga ah ee Mareykanka – GP Putnam's's's's Sue Grafton Memorial Award. Rendon, oo ka shaqeysa buuggeeda seddexaad ee taxanaha, ayaa sidoo kale ah qoraa afar buugaag aan qiimo lahayn, oo ay ka mid yihiin Powwow Xagaaga (Minnesota Historical Society Press, 2013).
Riwaayadaha Rendon waxaa ka mid ah Aargudasho macaan, oo loo xushay Shirkadda Tiyaatarka asaliga ah ee Oklahoma ee Bandhig Faneedka cusub ee 2020 Native American Play Festival. Waxay sidoo kale soo saartay oo soo saartay riwaayado ku wajahan dadka asalka u ah Tiyaatarka Taariikhda, Damaashaadka Fringe Minnesota, iyo Patrick's Cabaret. Waxay aasaastay tiyaatarka Raving Native, oo ah madal codka iyo aragtida u keenta fanaaniinta kale ee u dhashay Mareykanka.
Rendon ayaa yidhi: "Aad ayaannu uga adkeystanahay inta naxdinta ku jirto. Farshaxaniistu waxay naga dhigaysaa horumar, kaliya maaha inaan sii noolaano. Waxaan isku dayaa inaan qol u fidiyo farshaxanada kale ee u dhashay dalka Mareykanka. Markasta oo qof horay u socdo, waxay u oggolaanaysaa dadka kale inay horay u socdaan. ”
Gabay Rendon "Maxay naag Haween ah tahay inay Sameyso?" wuxuu ka soo muuqan doonaa gabayada soo socda ee Norton Anthology of Polyry Poetry ee cinwaan looga dhigay Markay Iftiimintii Dunida La Adkaadeeyay, Heesaheenna Ayaa Soo Galay. Gabayga Rendon “Resilience” waxaa sidoo kale lagu soo daray mashruuca dhijitaalka ah ee Abwaan Laureate Joy Harjo ee Mareykanka “Living Nations, Erayada Nolosha: Khariidadda Poetry First People,” kaasoo ku biiri doona ururinta joogtada ah ee Xarunta Fanka Mareykanka ee Maktabadda.
Abaalmarinta Rendon waxaa ka mid ah deeq 2020 Ensemble / Playwright Collaboration Grant oo ka socota Shabakadda Isboortiga Isboortiga iyo Xarunta Ciyaaraha, iyo 2020 Covid-19 oo ah deeq faneed oo ay ka bixisay Tiwahe Foundation oo muujineysa adkeysi inta lagu jiro masiibada. Rendon waxaa loo magacaabay abaalmarinta 2018 50 In ka badan 50 ee AARP Minnesota iyo Pollen Midwest wuxuuna helay Loft '2017 Speaks Word Immersion Fellowship oo uu la yeeshay abwaan Diego Vazquez.
“Marcie waxay si muuqata ugu dhaqaaqday sidii suugaan, gabayaa, iyo jilaa, iyada oo ay weheliso qayb ka mid ah ka shaqaynta beesheeda iyada oo qayb muhiim ah ka ah deegaanka dhaqankeena,” ayay tiri Sandy Agustin, xubin ka ah guddiga xulashada Abaalmarinta Farshaxanka Faneed. "Haddii ay wax ka qoreyso iskuullada, xabsi-ku-haynta, ama faafitaanka haweenka maqan iyo dilka loo geysto haweenka asaliga ah, waxay kobcineysaa codadka Hogaanka iyo waxay sii xoojineysaa bulshooyinka badanaa aan la maqal, gaar ahaan haweenka asaliga ah."
Sawirka Cedit: Jaida Gray Eagle
Wuxuu ku dhashay waqooyiga gobolka Minnesota sanadki 1952, Rendon wuxuu ahaa aqristaha sharafta badan, qoraa hal abuur leh, iyo gabayaa da 'hore. Intii ay ku baranaysay caddaaladda dembiyada Kulliyadda Moorhead State College horaantii 1970meeyadii, waxay qayb ka ahayd koox u dhaqdhaqaaqa ardayda u dhaladka ah oo si guul leh u dalbaday furitaanka waaxda koowaad ee daraasadda Indian Indian ee jaamacadda.
Ka dib markay u dhaqaaqday xaafada Phillips ee Minneapolis dabayaaqadii 1970meeyadii, waxay ka shaqeysay lataliye iyo daaweeye, halka ay ku barbaarisay seddexdeeda gabdhood. Sannadkii 1991-kii ayay aragtay waxqabad uu sameeyay Margo Kane, oo ah farshaxan Cree-Saulteaux, oo ku dhiirrigelisay Rendon inay la wadaagto gabayadeeda iyo qoraayada ballaaran.
Rendon waxay dhawaan bilawday inay akhrinto gabayadeeda meelaha caanka ah, oo ay ku jiraan Intermedia Arts iyo Patrick's Cabaret, waxayna aasaastay Raving Native Theater.
Rendon waxay la nooshahay xaafada Stress ee Minneapolis iyada iyo qoyskeeda, oo ay kujiraan laba wiil ayee ayee ah iyo ayeeyo ayeeyo. Haatan waxay la shaqeyneysaa farshaxanka Heather Friedli rakibaadda soo socota ee matxafka Weisman Art Museum oo ku saabsan heerarka sare ee xabsiyada ee haweenka asalka u ah.
KU SAABSAN MAAMULKA MACNIILKA ARTIST
The Abaalmarinta Farshaxanka aqoonsan yahay farshaxan-yahannada doortay inay noloshooda iyo mustaqbalkoodaba ka qabtaan gudaha Minnesota, taas oo ka dhigaysa gobolkeenna meel dhaqameed qani ku ah. In kasta oo ay leeyihiin karti iyo fursad ay ku sii wataan shaqadooda meelo kale, farshaxan yahannada ayaa doortay inay sii joogaan - oo ay sii joogaan, waxay sameeyeen isbadal. Waxay asaaseen oo xoojiyeen ururada farshaxanka, dhiirigeliya fanaaniinta da’da yar, iyo soo jiidashada dhagaystayaasha iyo maamulayaasha. Waxa ugu fiican, waxay sameeyeen farshaxan cajiib ah, oo fikir xambaarsan. Ujeedada maalgelinta farshaxanka ee McKnight waa in la taageero farshaxanka shaqeynaya ee abuuraya kuna biiriya jaaliyadaha firfircoon. Barnaamijka Farshaxanka Aasaaska wuxuu ku saleysan yahay aaminaada ah in Minnesota ay sii fiicnaato markii farshaxannadeedu wanaagsanaadaan. Abaalmarinta Farshaxanka Qaddarintu waxay u tagtaa hal farshaxan oo reer Minnesota ah sannad kasta.
KU SAABSAN WAXBARASHADA SHAQADA
The McKnight Foundation, aasaaska qoyska fadhigiisu yahay Minnesota, wuxuu horumariyaa cadaalad dheeraad ah, hal abuur, iyo mustaqbal aad u badan halkaas oo dadka iyo meeraha ay ku najaxaan. Waxaa la asaasay 1953, McKnight Foundation waxay si qoto dheer uga go'antahay horumarinta xalalka cimilada ee Midwest; dhisidda Minnesota loo wada dhan yahay oo loo dhan yahay; iyo taageerista fanka ee gobolka Minnesota, neerfaha, iyo cilmi baarista dalaga caalamiga ah.
Ogaysiisyada Abaalmarinta Fellowship Artist 2022
Magacaabista Abaalmarinta Farshaxanka Sharafta leh Waxay ku Furan tahay Abaalmarinta $100,000 oo la kordhiyey
By Sarah Berger Febraayo 2022